Ogaden News Agency (ONA) – Maamuka Hargaysa oo bilaabay in la budheeyo qofkii sheega ONLF
Maamuka Hargaysa oo bilaabay in la budheeyo qofkii sheega ONLF
Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee CPJ ayaa ku eedeeyay maamulka Hargaysa inay xidheen oy jidh dileen saxafiyiin ka hadlay ONLF.
Maamul ku sheega isku urursaday gobolka Waqooyi Galbeed ee Somaliya ayaa tan iyo markay ku dhawaaqeen inay yihiin maamul ka madaxbanaan Qarankii Somaliyeed iska dhaadhicyey inay Itobiya gacanta ugu hayso aqoonsiga dawlad-nimadooda taasoo ku xidhan inay la coloobaan qofkii Itobiya la colooba. Waxaan horey u ogayn iyagoo dad shacab ah intay qab-qabtaan ku andacooda waxaan haynaa xubno ONLF ah oo u dhiiba gumaysiga. Waxaa ku xigay ciidan farabadan oo ONLF ah ayaa ka soo dagay badda oon hareereynay ka dibna naga baxsaday. Waxaa ku xigay inay yidhaahdaan ciidan ONLF ah ayaa weerar nugu soo qaadaygaar ahaan marka uu dagaal dhex maro maleesiyaad kooda iyo kuwa PL. Akhri. Arintii waxay mareysaa hadda in qofkii yidhaahda ciidan ONLF ah ayaan aragnay in la budheeyo sida ay sheegeen ururka caalamiga ah ee u dooda saxafiyiinta – Committee to Protect Journalists CPJ.
Waxay haya’dan caalamiga ah xaqiijisay in 21kii Feberaayo laga qabtay magaalada Borama wariye wax u qora shabakadda Subulahanews oo lagu eedeeyey inuu war aan jirin sheegay oo ahaa ciidan ONLF ayaa saldhig ka samaystey magaalada Lughaya. Waxay kaloo ay sheegeen haya’adda CPJ in Maxamad Cabdiraxmaan si xun loola dhacay qoriga dabadiisa iyo budh oo isagoo aad u liita la dhigay isbitaalka. Waxaa ka horeeyay qaraaca M. Cabdiraxmaan in bishan 9keedii wariye wax ku qora todobaadlaha Ogaal sidoo kale uu xidhay wasiirkooda arimaha gudaha oo isagana lagu eedeeyay warbixin ka qoray ONLF.
Waxaase la yaableh in bil ka hor ay ahayd markay ku andacoonayeen waxaa na soo weeraray ciidamo is-biirsaday oo ONLF ay hogaaminayso. Taasoo ahayd markii lagu jabiyay duulaankii gardarada ahaa ay ku soo qaadeen maamulka Hargaysa dadka shacabka ah ee dagan Buuhoodle iyagoo raba inay xasuuqaan ka dib markay ku dhawaaqeen inay samaysteen maamulka cusub oo la magac baxay Khaatumo State. Wariyayaashan hadda la budheeyay ee qaarkood isbitaalada yaalaan waxay doonayeen un inay sii buunbuuniyaan arimahaa oy ka xanaajiyaan Itobiya si ay taagero uga siiso dagaalada lagu jabiyay ee ka socda deegaanada maamulka Khaatumo. Waxaysan ogayn wariyayaashan masaakiinta ah siyaasad xumada kooxda Hargaysa oo laablakac ku dhisa siyasadooda iyo mala awaal. Eng. Faysal C. Waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta sida xorta ah isaga hadla ayaa laga hayaa inuu yidhi; “20 sano ayaan dadweynaha been u sheegaynaye maxaan ku odhanaynaa hadda” , markii loo dareeray shirkii London oo Siilaanyo uu kaga qaybgalay inuu ka mid yahay maamaulada ka jira gobolada Somaliyeed.
horta dhamaan dadka somalida ahi ha ogadaan inan hargeysa ka tali dadk alihiii iidiinka is difaace oo qoryo haystee dadkan automatic ayaa amar loo siya hadii anay amarada u hogaansamin ethiopian iyaga la qabsanayaa si aan iyaga dhib us oo gaadhin wa inay is dhaafiyaan wixii cadaw ay ehtoipia leedahay sida u cadaad ah qofka fuleyga ah ee iska hor mariyaa walalkii si isagu u badbada taasna waxaa surto galieyey dhamaan burburka baahsan ee ku hab sadey somaliyaa hadii somli jir lahayd qofna hargeysa laga ma kaxaysteen hubna berbera kama soo degaan muqdisho loogu wereray ehtiopian airportka hargeysa ku ma badheen madax wayanaha somaliland adeer burburku wuu inaa wada haystayee alla hayna dhiso waxba ha la yaabin nin la budheeeeeeeeeeeeeeeeeeye qaarba la layahay alaan